Antigua sy Barbuda mizaka ny zom-pirenena Moon Gate Antigua
Amidy ny anjaran'ny Boutique Hotel hahazoana Antigua sy Barbuda Citizenship
Tongasoa eto amin'ny vavahady Antigua Moon
Moon Gate Antigua dia trano fandraisam-bahiny misy efitrano fandraisam-bahiny miisa 40 ahitana an'i Half Moon Bay, iray amin'ireo morontsiraka mahafinaritra indrindra ao Antigua izay misy fahitana mahavariana.
Ny suite rehetra ato aminay dia feno fitaovana sy vidiny mifanentana hahafahana mahafeno ny fepetra takian'ny mpampiasa CIP. Ny suite rehetra ataonay dia tompona trano malalaka ary afaka ampanofaina ho an'ny tompona trano rehetra.
Ny tompona trano sy ny vahiny dia mahazo fidirana amin'ny kojakoja maro karazana.
Ny resort dia miorina amin'ny faritra Half Moon Bay, amin'ny toerana milamina sy milamina.
Avy eto dia misy fahitana mahafinaritra ny iray amin'ireo morontsiraka madio indrindra any Antigua.
Ny hotely dia misy fandraisana, trano fisakafoanana à la carte, trano fisakafoanana, trano fisotroana club, spa, dobo tsy manam-petra ary fivarotana fanomezana.
Suitey mahazatra 24
Suites Premium 8 misy dobo filomanosana
Suite Penthouse iray misy efitrano fatoriana misy efitrano fatoriana misy efitra iray
1 Toeram-pivoakan'ny kilalao barefoot
Fitaovana amin'ny hotely
Ny fanananay rehetra dia feno fitaovana sy manana kojakoja maro karazana ao anatin'izany ny fidirana amin'ny internet sy ny serivisy fitakiana on-demand.
Bara vita amin'ny cocktail
Trano fisakafoanana La Carte
Pisinam-bahoaka tsy misy farany
Hiverina any amin'ny Citizenship amin'ny Real Estate